» Dhawaaqii rasaasta Dhawaq baa badalay! Qormo xiise gaar ah leh oo Muqdisho ku saabsan!
Dhawaaqii rasaasta Dhawaq baa badalay! Qormo xiise gaar ah leh oo Muqdisho ku saabsan!
Nov 30, 2012 - 1 Jawaab	Dadka qaar riyo maalmeed ayey la tahay in aysan madaafiic ka dhaceyn Muqdisho, rasaas wiifeysa aysan dad jidadka ku dileyn misena iska-hor-imaadyo beeleed aan warbaahinta laga sii deyneyn.
Aan kaftankana jalleecee! Mar baan is iri qormooyinkii Abukar Albadri iyo Faallooyinkii Cabdulqadir Dulyar waxaa bedelay Facebook, falanqeyntii BBC waxaa bedelay Paltalk dhawaqii Rasaastee ay Muqdisho caanka ku noqtayna waxaa edelay shanqarta dubaha lala dhacay masaamiirta iyo Laamayeeriga, kuwaas oo magaalada oo dhan ka socda.
Qalinka: Abukar Albadri :
« Warbixinta Ka HoreysayBaydhaba oo dhalinyaro Shabaab ah lagu xerxeray kadib markii la qabtay.	Warbixinta Xigto »Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho ka dagay	One Response to Dhawaaqii rasaasta Dhawaq baa badalay! Qormo xiise gaar ah leh oo Muqdisho ku saabsan!
Madina Haji says:	November 30, 2012 at 8:37 pm	Wadkumahad santahay sida aad nuguqeexday isbedelka kajira magaalada muqdisho waxaan kurajeena in aad kasiwado wanxan kufarxaa hadalka wanaagsan ama hadalada dhiirigejinta ah waxey dhirinayan dadkena qubajogta ah lakiin hadala warbahinta eycadeysten waakow nasiidhaqajinaya waxaan urajena inay wanaga kasheqeyan Abukar Albaadri sidada uwad wanaga addunya iakhiro waad libaaneysa? Waxaanahay qurbajog inbadan wadanka kamaqna aniga iyo dad ilamid ah madama wadanka uu soo hagagaayo riyadeyeda wa in aan soolabto!waxan laqabsanay wadamada aan jogno oo hurumay dhica teknojiga wayel iyo carurba sedebaan burjiko iyo dhuxul ulaqamsan karna sede dhar gacanta logudhaqa musqulaha sede lagayela? Adiga iyo dadka kuxeeldheer arimaha isbedelada falanqeya waxaan jeclanlaha in aad arinta kahadashan banaamijyada ty yada iyo waxkasta oo soodhaweynaya qurbajoteyna waxaqiiq hadi arimahas soo dhawadan in aan soo laabaneyno Madina Sweden